အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်း China Manufacturers & Suppliers & Factory
အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်း ထုတ်ကုန်များ)
on-site ကို / APP ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုပူရောင်းမည် on-site ကို / APP ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဖော်ပြချက်: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး, မြေ၌အသက်တာကိုထောကျပံ့တစ်ခုမရှိမဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ETR...
Cylinder ဖြများအတွက် 1. ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင်စက် ဖေါ်ပြချက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြ System ကိုတိုက်ရိုက်ချုံ့လေကြောင်းကနေ 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာစနစ် Atlas Copco လေကြောင်း Compressor, SMC...
ဆေးရုံလျှပ်စစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖုန်စုပ်စုတ်ယူခြင်းယူနစ်ဖျေါပွခကျြ ETR လွတ်လပ်စွာတစ်ဦးရေလက်စွပ်လေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ဓာတ်ငွေ့-ရေ separator တစ်လေဟာနယ် solenoid valve, ပိုက် fittings နှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၏ရေးစပ်ထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံလေဟာနယ်စုပ်စက်ယူနစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ရပ်ကွက်အာကာသသိမ်းပိုက်ခြင်းမရှိဘဲ,...
PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် 1.PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် ဖေါ်ပြချက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြ System ကိုတိုက်ရိုက် compressed လေကြောင်းကနေ...
က ISO 9001 နှင့်အတူဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်စက်ရုံစျေး 1. ဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဘို့အသုံး...
ရပ်ကွက်သူနာပြုတပ်ဆင်ခြင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်စနစ် 1. ရပ်ကွက်သူနာပြုတပ်ဆင်ခြင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်စနစ် ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာယူနစ်စနစ်ရဲ့မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel...
ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးစနစ်ဖြေရှင်းချက် ETR ဆေးရုံ Medcial ဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးစနစ်ဖြေရှင်းချက်ဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုဓာတ်ငွေ့ပေးဝေရေးစနစ်ကခေတ်သစ်ဆေးရုံများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ငွေ့သုံးစက်ကိရိယာများကိုသင့်လျော်သောဒီဇိုင်းနှင့် setup...
လူနာခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ဆေးရုံအရေးပေါ်သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ် လူနာခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ETR ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်ဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။...
ယန္တရားအောက်စီဂျင် Containerized အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုအသက်ရှူခြင်း
ယန္တရားအောက်ဆီဂျင် Containerized အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုအသက်ရှူခြင်း ယန္တရားအောက်စီဂျင် Containerized အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဖျေါပွခကျြအသက်ရှူခြင်း: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး, မြေ၌အသက်တာကိုထောကျပံ့တစ်ခုမရှိမဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ETR ယန္တရားအောက်ဆီဂျင်...
နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထားအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အောက်စီဂျင် Generating ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ စက်ရုံဖျေါပွခကျြ maunfacturing နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထားအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အောက်စီဂျင် Generating: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး,...
စစ်ဆင်ရေးအခန်းဖျေါပွခကျြမြားအတှကျဆေးရုံလူနာတင်ယာဉ်စုတ်ယူခြင်းယူနစ်စျေးနှုန်း ETR လွတ်လပ်စွာတစ်ဦးရေလက်စွပ်လေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ဓာတ်ငွေ့-ရေ separator တစ်လေဟာနယ် solenoid valve, ပိုက် fittings နှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၏ရေးစပ်ထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံလေဟာနယ်စုပ်စက်ယူနစ်တီထွင်ခဲ့သည်။...
Sucion ယန္တရားစနစ်ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းစက်ဖျေါပွခကျြ ETR လွတ်လပ်စွာတစ်ဦးရေလက်စွပ်လေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ဓာတ်ငွေ့-ရေ separator တစ်လေဟာနယ် solenoid valve, ပိုက် fittings နှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၏ရေးစပ်ထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံလေဟာနယ်စုပ်စက်ယူနစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ရပ်ကွက်အာကာသသိမ်းပိုက်ခြင်းမရှိဘဲ,...
ဦးခေါင်း Console အအိပ်ရာအနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်ရပ်ကွက်ဆေးရုံ
ဦးခေါင်း Console အအိပ်ရာအနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်ရပ်ကွက်ဆေးရုံ ဦးခေါင်း Console အအိပ်ရာ 1.Low ကုန်ကျစရိတ်ရပ်ကွက်ဆေးရုံ ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က,...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်သက်သာလာခြင်း ROOM တွင်အိပ်ရာခေါင်းကိုယူနစ်စနစ်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်သက်သာလာခြင်း ROOM တွင်အိပ်ရာခေါင်းကိုယူနစ်စနစ် 1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်သက်သာလာခြင်း ROOM တွင်အိပ်ရာခေါင်းကိုယူနစ်စနစ် ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount...
ရပ်ကွက်နံရံအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်ကုန်ကျစရိတ် 1. ရပ်ကွက်နံရံအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်ကုန်ကျစရိတ် ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဘို့အသုံး built-in...
အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်း အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်း Facility အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုပ်ယူစက် အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်းယူနစ် အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်းစက်ရုံ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်း Facility စျေး အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်းဘူတာစျေး အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်း Facility စက်ရုံ